नेपाल आज | ‘पोर्न साइट’ पुँजीवादको चरम नग्नता हो (भिडियोसहित)
‘पोर्न साइट’ पुँजीवादको चरम नग्नता हो (भिडियोसहित)
काठमाडौं । राजनीतिमा झन्डै दुई दशकभन्दा पनि लामो यात्रा गर्दै आएकी नेकपाको केन्द्रीय सदस्य तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य अञ्जना बिशंखे भन्छिन्, ‘भर्खरै मात्र दुई पार्टीको एकीकरण भएको हुनाले ३३ प्रतिशत महिला पार्टीभित्र पु¥याउन गाह्रो भएको हो । हामीले पनि पु¥याउन जोड दिएकै छौँ । ३३ प्रतिशत महिला पु¥याउन गाह्रै भएको कुरा पार्टीले पनि स्वीकारेकै छ ।’
नेपाल आजकी अर्कना खातुनसँग समसामयिक विषयमा कुराकानी गर्दै सांसद बिशंखेले भनिन्, ‘हामीले पार्टीभित्र ३३ प्रतिशत महिलाको सहभागिताका लागि आवाज उठाइरहेका छौँ । पार्टीले पनि अलिक व्यवस्थित ढंगले ३३ प्रतिशत पु¥याउछौं भनेर प्रतिबद्धता गरेकै छ । राजनीतिक पार्टीहरूले नै बनाएको कानुन हो । हाम्रै पार्टीको पहलमा गरिएको निर्णय हो जसलाई नकार्न पनि मिल्दैन ।’ ‘हाम्रो पार्टीभित्र महिलाहरूको संख्या राम्रै छ नपुगेको पनि भन्न मिल्दैन’, उनले थपिन् ।
योग्य पुगेका पुरुषहरू पनि केन्द्रीय समितिसम्म आउन सकेका छैनन्
विशंखेले भनिन्, ‘महिला कै मात्र पनि योग्य नै अपुग भएको भन्न मिल्दैन । योग्य पुगेका महिलाहरू थुप्रै हुनुहुन्छ । समग्रमा हेर्ने हो भने योग्य पुगेका पुरुषहरू पनि केन्द्रीय समितिसम्म आउन सकेका छैनन् । महिला भएर पनि लैंगिक हिसाबले हामी बोल्न अलिक मिल्दैन । किनभने पार्टीभित्र पनि हामी सरहको एकदमै पाको, क्षमता भएका पुरुषहरू पनि पाइरहेको देख्दैनौ ।’
विशंखेले भनिन्, ‘हामी पार्टीका नेता हाैँ महिलाको मात्र नेता त होइनौँ । जति आन्दोलनहरू भए सबैमा महिलाहरूको संघर्षमय अग्रिम भूमिका रह्यो । तर नीति निर्माणमा सहायकबाहेक अरू भूमिका राख्नै चाहेनन् पार्टीमा रहेका उच्च पदाधिकारीहरूले । यसको लागि विशेष व्यवस्था हुनुपर्ने हामीले बारम्बार कुरा उठाई रहेकै छौ । पुरुष र महिलाको क्षमता र इतिहास बराबर रहेतापनि अझैपनि नेतृत्वमा उदासीनता देखिए कै हो ।’
सिँगै राज्यसत्ता हाम्रो त पक्कै पनि होइन
पार्टीमा चल्ने भनेको विभिन्न विचार र दर्शनधाराले कुन विचारधारा कुन दर्शनको जगलाई जनतासमक्ष पु¥याउने र त्यसलाई कसरी चलाउने त्यो सरकारले सोच्ने पो हो । सरकार राज्यको एउटा सत्ताको अंग मात्र हो, सिँगै राज्यसत्ता पक्कै पनि हाम्रो मात्र होइन । सरकारको एउटा अंगमा मात्र बसेर सबैथोक एकैचोटी गर्न नसकिने कुरा हो’, उनले भनाइ छ ।
उनले भनिन्, ‘अहिलेपनि पञ्चायतकालीन कर्मचारी, सेना, प्रशासन, न्यायालयहरू छन् । सबै एकैचोटी उल्ट्यिाइन्छ पनि त्यसैले त्यो सबै कुराको पुनर्संरचना हुन जरुरी रहेको छ ।’
संविधान भित्रको मौलिक ऐन बनाउने काम साधारण पक्कै थिएन
‘बल्लतल्ल त संविधान निर्माण भयो । संविधानको जगमा बसेर संविधानभित्रको मौलिक अधिकारका ऐनहरू पारित ग¥र्यौं । यो एउटा ठूलो काम भयो । संविधानभित्रको मौलिक ऐन बनाउने काम साधारण पक्कै थिएन । सबै प्रक्रिया गरिसकेपछि अबपनि दुई तिहाइको बहुमतले गरेर देखाएन भने जनताले यो सरकारलाई पत्याउने बाटो हुने छैन’, बिशंखेको टिप्पणी थियो ।
झार भनेको त आफैँ उम्रिन्छ, तर चिजबिजका लागि रोप्नु नै पर्छ
‘राम्रो नराम्रोबीच द्वन्द्व भइरहेको हुन्छ । सबैको भित्र देउता पनि हुन्छ राक्षस पनि हुन्छ । फरक यति मात्र कुनबेला कुन रूपले ठाउँ लिरहेको हुन्छ । रूपचन्द्र बिष्ट भन्नुहुन्थ्यो, ‘तपाईंभित्र एकदमै धेरै ज्ञान भयो भने तपार्इं भगवान् हुनुहुन्छ रे, अनि ज्ञान नै भएन भने राक्षस हुनुहुन्छ रे, र अलि अलि थाह पाउनुभयो भने मान्छे हुनुहुन्छ । झार भनेको त आफैँ उम्रिन्छ, तर चिजबिजको लागि रोप्नु नै पर्छ’, बिशंखेको मत रहेको छ ।
उनले भनिन्, ‘जति घटनाहरू भइरहेका छन् । सोसल मिडियाको माध्यमले तुरुन्तै हात हातमा पुग्छ । त्यसले गर्दा एक कान दुई कान मैदान हुनपुग्छ जस्ले गर्दा अहिलेको युगमा त्यसका विरुद्ध आवाज उठाउने चेतना जगाउन सहज भएको छ जुन एक किसिमले राम्रो हो ।’
कारबाही अगाडि बढाउनुपर्ने हो त्यसमा सरकार चुकेकै छ
बिशंखेले भनिन्, ‘अहिलेको सरकार आएर बलात्कार बढ्यो भन्ने कुरा म चाहिँ मान्दिनँ । जुन ढंगले यसविरुद्ध आवाज उठाउनुपर्ने हो, कारबाही अगाडि बढाउनुपर्ने हो त्यसमा सरकार चुकेकै छ । यो सत्यलाई नकार्न पनि सकिन्न । किन सरकार यति कमजोर भयो किन यस्तो फितलो भयो भन्ने प्रश्नमा उनले भनिन् ‘हामी आफैँबाट पनि उठिरहन्छ बेला बेला । एक ठाउँमा फितलो भएपछि अर्को ठाउँमा प्रोत्साहन मिल्छ । त्यसैले फितलो भएको प्रक्रियालाई सरकारले स्वीकार्नै पर्छ ।'
'निर्मला कै केसमा भन्नुपर्दा त्यो सुस्त मनस्थितिलाई फाँसी दिएको भए के हुन्थ्यो होला ? त्यस्तै गरिब, दलित, पहुँचविहीन खालका मानिसलाई मारिसकेपछि फेरि बचाउन सकिन्थ्यो र ? त्यसकारण मलाइ लाग्छ बलात्कारीलाई फाँसी दिएर त्यसको हल हुँदैन । यहाँ कस्ता सोचका मान्छे छन् भने महिला भनेकै उनीहरूको अस्तित्व यौनमा मात्र सीमित छ । त्यस्ता धर्म संस्कृतिहरू जस्ताको उस्तै रहुञ्जेल त्यसले बलात्कारको शृंखला घट्दैन ।’
पुँजीवादको चरम नग्न हो पोर्न साइट
उनको भनाइ छ, ‘पोर्न साइटले पनि मान्छेहरूमा विकृति जगाउने काम गर्दैछ । यो पुँजीवादको चरम नग्नता हो । जसरी लागूपदार्थ सेवन गरेर विकृत मानसिकता हुन्छ त्यसरी नै पोर्न साइट हेर्नेहरूको पनि विकृत मानसिकता हुन्छ । पोर्न साइटले नराम्रो तरिकाले विकृति फैलाउँदै आएको छ । सिँगो पुँजीवादले महिला मात्र सेक्स गर्ने साधनको रूपमा देखाएको छ ।’